म तिमीसँग बस्दिनँ, मलाई डिभोर्स देऊ! « Sudoor Aaja
२ आश्विन २०७८, शनिबार १९:४१
सुदूर आज २ आश्विन २०७८, शनिबार १९:४१
‘यसरी कहाँ एक्लै हिँड्न पाइन्छ। म पनि आजदेखि तिमीसँगै हिँड्ने हो’, भन्दै अगाडि बढी।
‘मेरो घर तिम्रो घरबाट दश मिनेट पर हो। मैले तिम्रो दाइ, दिदी, बुवा, आमा सबैलाई चिनेको छु। घर पनि देखेको छु। मैले तिमीलाई धेरै अगाडिदेखि नियालिरहेको थिएँ।’ ऊ मकै भुट्दा मकै पड्के जस्तैगरी भटट्ट्ट गरेजस्तो गरी बाटोभरि बोलिरही।
‘सुन न म तिमीलाई २० मिनेटदेखि पर्खिराखेको छु। तिमी किन बोल्दैनौ ?’ भनी र फेरि हात समाई। मलाई हिजोको जस्तो कम्पन त भएन। तर मनमा एक किसिमको डर चाहिँ लागिराख्यो।
अब उसले बोल्न सुरू गरी -‘तिमीलाई मैले तीन वर्षअघिदेखि हेरिरहेको थिएँ। तिम्रो हरेक क्रियाकलापलाई नजिकबाट हेर्ने मौका मिलेको थियो। त्यसैले मलाई तिम्रो धेरै माया लाग्छ। तिमी साह्रै मनपर्छ र तिमीसँग क्लोज फ्रेण्डसीप गरौं जस्तो लाग्छ। तिमी किन कोहीसँग साथी बन्दैनौ? किन खुलेर बोल्दैनौ?’ यसरी अनेक प्रश्न सोधी? म मुसुक्क हाँसें र ‘मेरो बानी नै यस्तै छ सानैदेखि’ भनें।
अनि उसले भनी -‘मेरो प्रयास सफल भयो। तिम्रो मुहारमा हाँसो देख्न चाहेकी थिएँ। आज देख्न पाएँ।’
स्कुलमा ठूलो कम्पाउण्ड ठूला-ठूला भवन करिब १५०० विद्यार्थी भएको ललितपुरको बोर्डिङ स्कुलमा कक्षा ९ मा हामी अध्ययन गर्थ्यौं। एउटै स्कुल, एउटै कक्षा भए पनि सेक्सन फरक फरक थियो। हाम्रो स्कुलमा कक्षा ९ मा ए देखी ई सेक्सनसम्म थियो। म सेक्सन ‘डि’मा थिएँ भने ऊ ‘ई’ मा थिई।
यसै क्रममा ऊ धेरै बोल्थी। म एकदम कम बोल्ने, लजालु स्वभावको, कसैसँग नखुल्ने। एक दिन उसले ‘तिमी मलाई एकदमै मनपर्छ। धेरै वर्षदेखि तिमीलाई मैले नियालिरहेको छु।
आज अकस्मात तिमीसामु आएर यो कुरा भन्ने हिम्मत बटुलेकी छु। प्लिज तिमी मलाई बुझ्ने प्रयास गर। आई रियल्ली लभ यू रोहित।’
एकदिन उसले एक्कासि स्कुल छुटेर निस्कने समयमा बाटोमा ‘रोहित तिमीले मलाई एस पनि भनेनौ र बोल्न नि छोड्यौ भने म झुन्डिएर मर्छु’ भनी। त्यति समयसम्म मैले नि उसलाई सँगै स्कुल, घर जाने कक्षामा सँगै एउटै बेन्चमा बस्ने बानी परेको महसुस गरिसकेको थिएँ। त्यसैले उसलाई अगाडि गएर त्यस्तो नभन भनेँ र निउँरिरहें। उसले एक्कासि आएर मलाई अंगालोमा बाँधी। त्यसपछि मैले नि उसलाई आई लभ यू टु भनें।
मैले स्मितालाई भने -‘मलाई त गाह्रो भयो। तिमीहरू क्या खुलेर कुरा गर्छौ। म कसैसँग बोल्न सक्दिनँ। मलाई यहाँ बस्न गाह्रो हुन्छ जस्तो छ’ भने।
उसले मलाई अँगालोमा बाँधेर सम्झाई ‘त्यस्तो हुँदैन रोहित’ भनी।
‘तिमी यति राम्रो छौ। यस्तो गोरो, गोलो मुहार, ठूला ठूला आँखा गुलावी कलरको ओठ, सुरिलो नाक मिलेको शरीर यस्तो राम्रो। हाइट पनि ५ फिट ८ इन्च भएका छौ। यस्तो राम्रो मान्छेले त्यस्तो भन्न हुन्छ ?
‘सुन त मलाई अघि साथीले के भनी थाहा छ ?’
‘के भनी ?’
‘तँ यस्तो काली मोटी छेस् तर कस्तो ह्यान्डसम केटा पट्याएको। म त झण्डै लडेको भन्दै थिई,’ ऊ मुसुक्क हाँसी र म पनि सँगै हाँसें।
‘हाई रोहित, स्मिता’ भनेर कुरा सुरू गरे।
अनि स्मिताको साथीले ‘म पनि भोलिदेखि व्यस्त हुन्छु। तिमीहरूलाई आज ओपेरा हाउस घुमाउन लैजान्छु’ भनी र नर्थ सिड्नीबाट हामी फेरि फर्केर विन्यार्ड गयौं।
आज त मजाले घुम्यौं। एकदम रमाइलो भयो, अब भोलिदेखि के हुने हो केही थाहा छैन। यसरी स्मिता कलेज जाने र उसले ‘म पढ्छु तिमी काम गर। मेरो पढाइ सकेपछि म पनि काम गर्छु। अनि तिमीलाई पढाउँछु’ भनेकी थिई।
उसले ‘अब म पनि काम गर्छु। हामी एउटा सानो क्याफे खोलौं। म क्याफे चलाउँछु। म कलेज गएको बेलामा स्टाफ राखौंला र तिमीले पनि मिलाएर हेर’ भनी। मलाई पनि हो जस्तो लाग्यो।
म पहिलाको जस्तो खटिएर र धेरै समय काम गर्न नसक्ने भएँ। म स्मितालाई साह्रै विश्वास गर्थें, माया नि गर्थें। कमाएको सबै पैसा उसैलाई दिन्थें। कहिले शंका गरिनँ। उसले पनि मलाई माया गर्थी। यसरी समय बित्दै थियो। बच्चा पाउने कुरामा हाम्रो बेला बेलामा झगडा हुन थालेको थियो। उसको बानीमा परिवर्तन आउन थालेको थियो। मैले अब म पढ्छु तिमी क्याफे चलाऊ अनि म एक ठाउँमा मात्रै काम गर्छु भनेको थिएँ। उसले ‘हुँदैन यत्रो लोन छ। अब एक वर्ष राम्रोसँग काम गर अनि अलि लोन घट्छ त्यसपछि तिमीलाई म पढाउँछु’ भनी।
मैले ‘तिमी कहाँ गएको ? के हो पारा ?’ भनेर बेस्सरी गाली गरें।
उल्टो आफैं रिसाएर ‘म तिमीसँग बस्दिनँ। मलाई डिभोर्स देऊ’ भन्न थाली। म छक्क परें। घरमा एउटा ढलेको ग्लास नि नउठाई बसेको मान्छे उसको मायाले अष्ट्रेलिया आएर एउटा गधाजस्तै केवल काम काम भन्दै गधाजस्तै भएर काम गरें। उसलाई पढाएँ। यत्रो सृष्टि गरें। आज उसैले यो के भन्दै छे भनेर म अतालेर रुन थालें।
‘के भनेको यस्तो नेपाल बसेको भए खान लगाउनकै लागि यत्रो दुःख गर्न पर्थ्यो ? मैले बुबाआमा सब परिवार छोडेर तिम्रो खुसीको लागि यहाँ आएर यत्रो दुःख गरेँ आज यो के भन्दैछौ?’ भनेर उसलाई कति सम्झाउन कोसिस गरें।
मैले के गल्ती गरें भन म तिमीबिना बाँच्न सक्दिनँ भने। तर उसको मुखबाट ‘मलाई डिभोर्स चाहियो। म अरु कसैलाई मन पराउँछु। म उसैसँग बस्ने हो। भोलि म सबै पेपर लिएर आउँछु। मलाई तिम्रो नेपालको केही सम्पत्ति चाहिँदैन तर यहाँको यो घर, गाडी र क्याफे चाहिँ मलाई दिनपर्छ। मैले तिमीलाई पिआरवाला बनाइदिएको छु। अहिले मेरो सामान लिन आएको भनेर सबै लुगा सुटकेसमा राखेर एकचोटि पनि मतिर नफर्की गई। म झ्यालबाट हेरिरहें।